4x4 ikhiphedi lensimbi engagqwali efakwe emishini ye-Uniqlo yokuthengisa
4x4 insimbi engagqwali ikhiphedi yensimbi efakwe emishinini ethengisa i-Uniqlo
Isikhathi: 2020-05-26 Hits: 15
Noma ngubani oke waya eJapane wazi kahle ukuthi kanjani umshini wokuthengisabahlala cishe kuwo wonke amakhona omgwaqo, ngakho-ke akufanele umangale kakhulu ukuthola ukuthi enye yezinkampani ezinkulu zesizwe ithathe isinqumo sokwethula umhlinzeki wayo e-US
Kepha lokhu kuyi-Uniqlo esikhuluma ngayo, ngakho-ke umshini wayo wokuthengisa uzobe unikela ngezinto zokugqoka kunokuphuza. Kunjalo, kwakhiwe umshini wokuthengisa othengisa izingubo.
Kulokho okungaba umhlaba wokuqala, i-Uniqlo ihlela ukwethula imishini yokuthengisa eyishumi kwamamitha ayisithupha ukuphakama ezindaweni eziseMelika, ezibandakanya izikhumulo zezindiza nezitolo ezinkulu, kubike iWall Street Journal ngoLwesithathu.
Okuphikiswa okugcwele izingubo kuzoba nokukhonjiswa kwedijithali futhi kuvumele abathengi ukuthi bakhethe usayizi nombala wezinto, okulindeleke ukuthi zikhawulelwe ezingcezwini ezimbili: amajakhethi aphansi kanye namahembe agcina ukushisa. Dlulisa amehlo kokukhethiwe, shaya inkinobho yokuthenga, futhi ukuthenga kwakho kuzokwehla kuthileyi ngaphakathi kwebhokisi noma kwikani.
Ama-dispensers angasebenza kalula uma useholidini bese ukhohlwa ukupakisha ibhantshi elifudumele. Uma kunjalo, ungavele ubambe eyodwa emshinini we-Uniqlo lapho uphuma esikhumulweni sezindiza.
I-Yuyao XiangLong Imboni Yezokuxhumana inikeza izinhlobo eziningi zekhwalithi ephezulu, engenamanzi, umshini we-vending ukumelana nemishini ikhiphedi yensimbis. Zonke izinkinobho zenziwe ngokuqina insimbi engagqwali or i-zinc alloy. Ingaphezulu le-inkinobho, isakhiwo kanye nephethini kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Okwedlule: I-Metal Keypad efakwe ku-Self-service Kiosk eDenmark
Okulandelayo: Ikhiphedi ekhanyisiwe yensimbi efakwe kumshini wokuthengisa imaski